आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दै ज्योति लाइफको साधारण सभा सम्पन्न
कात्तिक २६, काठमाडौं । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा बुधवार सम्पन्न भएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ को प्रतिवेदन पारित गर्दै आईपीओ जारी गर्ने प्रस्तावलाई समेत अन्तिम रुप दिएको छ ।
नयाँ कम्पनीको रुपमा सञ्चालित उक्त कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने गरी नियामक निकाय बीमा समितिबाट कारोबार सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुले कायम गर्नुपर्ने तोकिएको चुक्तापूँजी रू. २ अर्बको लागि रू. ६६ करोड बराबरको आईपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव बुधवारको सभाले पारित गरेको हो । हाल कम्पनीको संस्थापकतर्फबाट मात्र चुक्ता भएको पूँजी रू. १ अर्ब ५४ करोड रहेको छ । आईपीओ पश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब २० करोड पुग्नेछ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म कम्पनीले रू. ७ करोड २२ लाख २२ हजार खुद नाफा गरेको छ । यो अवधिसम्म कम्पनीको जगेडा कोष रकम रू. ४६ करोड ५ लाख ३४ हजार छ ।
विसं २०७४ साल भदौ १९ गतेदेखि बीमा बजारमा कारोबार शुरु गरेको उक्त कम्पनीले पहिलो त्रैमाससम्म रू. ३ अर्ब ७३ करोड ७७ लाख कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । उक्त कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १८ दशमलव ७६ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १३३ दशमलव २३ रहेको छ ।